Home » အသားပေး » မိုးတိမ်သင်၏ခရီးစီစဉ်
ဂျက်ဖ် Rosica သမ္မတအသုံးပြုပုံ လွန်စွာလိုလားသော
ငါတို့သည်ငါတို့၏မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါ လွန်စွာလိုလားသော နေရာတိုင်း 2013 အတွက်ရူပါရုံကို, စက်မှုလုပ်ငန်းမကြုံစဖူးအပြောင်းအလဲကာလနှင့်ရင်ဆိုင်နေရခဲ့သည်။ မီဒီယာတန်ဖိုးကိုကွင်းဆက်၏လျင်မြန်သော Digital ကခက်ခဲအကြောင်းအရာဖန်တီးသူ Workflows ချိတ်ဆက်နှင့်အလိုအလျောက်ရန်အဘို့အကို လုပ်. , ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုငွေဝင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရှုပ်ထွေးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ consumerization ကိုပရိသတ်တွေအကြောင်းအရာကိုလောင်ဘယ်လိုထိန်းချုပ်လျော့ကျလာ၏အသစ်တစ်ခုကိုအဖြစ်မှန်ဖို့ထိန်းညှိဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများရသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ရိုးရာဝင်ငွေသတင်းရင်းမြစ်အတွက်ငြင်းပယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များတစ် recalibration လိုအပ်သောနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုများအတွက်မဆုတ်မနစ်ဖိအားပြတ်တောက်လူများ, tools များနှင့် Workflows နှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်းစိန်ခေါ်
ဤအဓိကပြဿနာများကိုခဲ့ကြသည် လွန်စွာလိုလားသော နေရာတိုင်းရူပါရုံကိုနှင့်မဟာဗျူဟာ 2013 အတွက်ဖြေရှင်းရန်ထွက်ထားကြ၏။ ယခုဖွင့်လေးနှစ်အကြာမှာအဖြစ်မှန်ကြှနျတျောတို့၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအသွင်ပြောင်းပြီးပြည့်စုံသည်။ ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လူထုကိုအဖွဲ့များချိတ်ဆက်နှင့်၎င်းတို့၏ Workflows အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများဖွကြောင်းအများဆုံးဖွင့်လှစ်, တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်အကျိုးရှိစွာမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးထားပါတယ်။ အသစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ငွေရစေခြင်းစွမ်းရည်သူတို့ကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်အမြတ်အစွန်းနည်းလမ်းများမှာသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနှင့်အတူချိတ်ဆက်ကူညီနေတာပါ။
သို့သျောလညျးကိုပင်နည်းပညာတိုးတက်မှုအဖြစ်အရေးပေါ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစိန်ခေါ်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာအစဉ်အဆက်- သာ. ကြီးမြတ် volumes ကိုဖန်တီးရန်ဖိအားကြီးမားဖြစ်ပါသည်, သေးနည်းပညာဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့်ကြသည်မဟုတ်, သူတို့အရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အချုပ်ခန်းပါတယ်။ အမွေအနှစ်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ကဝန်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းအရှိန်အဟုန်ကိုင်တွယ်ရန်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ကဲ့သို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သို့မဟုတ်အကျိုးရှိစွာမရှိကြပေ။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စွမ်းရည်တိုးမြှင့်စျေးကြီးမကြာခဏမလိုအပ်တဲ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များလိုအပ်သည်။ နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံအိမ်ခြံမြေအိမ်သူအိမ်သားဟာ့ဒ်ဝဲဖို့ကအလွန်အဘိုးထိုက်သောစေသည်။ ပြဿနာပိုဆိုးလာ, သူတို့ရဲ့ On-ရဝုဏ်ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းရည် overprovisioned ပြီအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများအမှန်တကယ်သူတို့ရဲ့စနစ်တွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ underutilizing နေကြသည်။
မိုဃ်းတိမ်-in ကိုအကောင်းဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ-ဖွင့်လှစ်နှစ်ဦးစလုံးတိုးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်အခွင့်အလမ်းနှင့်အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့ပါးကိုက်ညီသောလမ်းမှမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုတိုးချဲ့။ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏တပ်ဖြန်နည်းပညာဖြေရှင်းချက် align ဖို့လိုင်စင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်စီးပွားရေးသွက်လက်ရဖို့။ သူတို့ကအစကို Workstation, လက်ပ်တော့, ဒါမှမဟုတ်မိုဘိုင်း device ကို-အားလုံးမှတဆင့်မီဒီယာတန်ဖိုးကိုကွင်းဆက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ဖြတ်ပြီးထိရောက်မှုတိုးပွားလာနေချိန်တွင်ဖြစ်စေ, ဘယ်နေရာကနေမဆိုချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းနိုင်ပါ။
အခုတော့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ, ကြည့်ရှုမှုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ဆှဖှေဲ့ကြီးထွားအသစ်သောနည်းလမ်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်အပြည့်အဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် operating နေဖြင့်မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလိုအပ်အဖြစ်မျှော်လင့်ဖြစ်စေမ, ဝယ်လိုအားထိပ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် workgroups နှင့်ဌာနဆိုင်ရာဖြတ်ပြီးစကေး၏ကြီးမားသောစီးပွားရေးသို့အသာပုတ်ပါအရင်းအမြစ်များကိုစကေးကိုက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့် elasticity အသစ်သောဆိုင်များတွင်မှချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ဖို့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအသစ်သောဝင်ငွေစီး exploit မှပစ္စည်း repurpose နှင့်နေရာတိုင်းသူတို့အွန်လိုင်း, TV ပေါ်မှာဖြစ်စေ, လောင်ချင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကမိုဘိုင်း device ကိုအပေါ်အကြောင်းအရာများရရှိနိုင်အောင်ဖြင့်ကြည့်ရှုသူများ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆှဖှေဲ့ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာကျင်းပနေကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါင် လွန်စွာလိုလားသော ပေးသော customer အသင်း (ACA) Vote, လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဖောက်သည်အသိုင်းအဝိုင်းတိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးရန်မကြုံစဖူးအခွင့်အလမ်း လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုအနာဂတ်ပြုသောပူဇော်သက္ကာ, မီဒီယာပညာရှင်များ (71.7%) ၏ကျယ်ပြန့်အများစုလာမည့်နှစ်နှစ်-လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခြင်းဝေးလံခေါင်သီ access ကို Workflows (15.8%) ကျော်မိုဃ်းတိမ်၎င်းတို့၏အခြေခံအဆောက်အဦများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းအသွားအလာအချို့ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရွေ့လျားစဉ်းစားဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သျောလညျးပဲ 4.8% စပ်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုဖြန့်ကျက်မော်ဒယ်များမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အနာဂတျမှာဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်သောအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမီးမောင်းထိုးပြ, မိုဃ်းတိမ်၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကိုအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာရွေ့လျားစဉ်းစားနေကြသည်။
အဲဒါကြောင့် လွန်စွာလိုလားသော မိုဃ်းတိမ်၌အပြည့်အဝ-စကေးမီဒီယာထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးလက်တွေ့ဘဝမှမီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်နေသည်။ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ, ဖန်တီးဖြန့်ဝေ, သူတို့-အပေါ်ဝုဏ်အတွင်းပုဂ္ဂလိကဒေတာစင်တာ, အများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကို, ဒါမှမဟုတ် hybrid များအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်သောဖြန့်ကျက် type ကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ content တွေကိုမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်လုံးဝပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။
At လွန်စွာလိုလားသော 2017 ချိတ်ဆက်ပါ, ငါတို့, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုပေးခြင်း, အ MediaCentral ပလက်ဖောင်းယခုမိုဃ်းတိမ်ကို-enabled ကြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြေညာခြင်းနှင့်ယနေ့အဆိုးဝါးဆုံးမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သွက်လက်။ အသစ်က cloud-based Client ကို applications များ, မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့်ဝယ်လိုအားအပေါ်အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်အတူ, သူတို့ကပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နည်းလမ်းတွေထဲမှာပလက်ဖောင်း, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် applications များလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းများအလွယ်တကူမိုဃ်းတိမ်၎င်းတို့၏မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပြောင်းလဲကူညီရန်, ငါတို့သည်လည်းငါတို့ကဲ့သို့မိုက်ကရိုဆော့ဖမရွေးပါဘူးကြေညာခဲ့သည် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုအများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်ကိုမိတ်ဖက်ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အလုပ်လုပ်သောဆန်းသစ်သောမိုဃ်းတိမ်ဖြေရှင်းချက်ပူဇော်ဖို့အတွက် Microsoft နှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် လွန်စွာလိုလားသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပြီးသားအသုံးပြုများနှင့်မဟာမိတ်အဖွဲ့ Partner tools များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
Microsoft ကမည်သည့်အရွယ်အစားမီဒီယာအဖှဲ့အစညျး၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ဘတ်ဂျက်ကိုက်ညီသောလူထုသည်မိုဃ်းတိမ် hosting အတွက်နဲ့ cloud service ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးသောမိုဃ်းတိမ်ကို hosting ပလက်ဖောင်းအဖြစ် Microsoft က Azure ရွေးကောက်တော်မူပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လုံခြုံမှုအရှိဆုံးဒေတာစင်တာပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်အတူ Microsoft ကမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏လက်လှမ်းမမီကျော်လွန်လုံခြုံသည်ဟုစိတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေးနိုင်ပါသည်။ နှင့်အတူ လွန်စွာလိုလားသော နှင့် Microsoft ရဲ့ကျယ်ပြန့်သောမိုဃ်းတိမ်နှင့်မီဒီယာနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်နှင့်ဗိသုကာပညာရှင်အသစ်သောနည်းလမ်းတွေမှာမိုဃ်းတိမ်ကိုမှတည်ဆဲထုတ်လုပ်မှုပမာဏပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
မိုဃ်းတိမ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများထိရောက်မှုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်မျှော်ကြည့်အမျှသွက်လက်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု, လွန်စွာလိုလားသော သူတို့ရဲ့ခရီးမှာသူတို့ကိုကူညီဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအ IBC 2017 မှာကျနော်တို့ကိုမိုဃ်းတိမ်တီထွင်မှုမိတ်ဆက်သူတို့ cloud-based မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု-ကနေလျော့နည်းရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှမီဒီယာတန်ဖိုးကိုကွင်းဆက်ကိုဖြတ်ပြီးပိုပြီးထိရောက်မှုနှင့်သွက်လက်၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ပုံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
က Ultra HD ဖိုရမ်	2017-09-04
ယခင်: အီလက်ထရောနစ်စမ်းသပ်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ် 1
နောက်တစ်ခု: Bluefish444 ဗီဒီယို, အသံ၏ KRONOS Range, ဒေတာများ I / O ကဒ်များပြသ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "မိုးတိမ်သင်၏ခရီးစီစဉ်" ။ http://www.broadcastbeat.com/planning-your-journey-to-the-cloud/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။